Ntugharị / ntụ ntụ Triptorelin Acetate: Ebee Ka M Ga-enweta Ya? - Phcoker
A na-akpọkwa Triptorelin Acetate dị ka Triptorelin Acetate140194-24-7 bụ ihe omimi nke kemịkalụ nke nwere ọtụtụ ihe nke abụọ na nke atọ na nke carbon carbon atom, na okwu ndị dị mfe karị, nke a pụtara na enwere ọtụtụ akara igwe, ndị otu na-arụ ọrụ na carbon. atom na usoro ihe eji eme ihe. Site na okwu a bu ‘Organic’, ihe putara bu molekul nwere carbon atom dika nke mbu. Ngwakọta ọ bụla nwere ikuku carbon atom na ọ bụ ya mere carbon ji bụrụ isi ndụ.
A na-eji Triptorelin Acetate mee ihe n'ọtụtụ ebe dịka ọgwụ yana maka kemịkalị kemịkal n'ụlọ nyocha. Ojiji nke ọgwụ ahụ kacha mkpa n'ihi na ọ pụrụ iche. Triptorelin Acetate bụ acidic dị nwayọ ma nwee ntakịrị inye onyinye hydrogen ka ukwuu ma e jiri ya tụnyere ọnụego hydrogen. O nwere usoro kemịkal nke C66H86N18O15 na nkezi ngụkọta atọm nke 1311.49 gram kwa. Ndị na-azụ ahịa ma ọ bụ ndị na-ere ọgwụ nwere ike iji usoro ndị ahụ dị ka decapeptyl, okwupeptyl wdg, nke pụtara n'ogo Triptorelin Acetate. Na iji Triptorelin Acetate n'ụwa a taa ama ama, A na-eji ọgwụ agwọ ọrịa kansa prostate dị elu (Na-ezo aka na gland endocrine na usoro ọmụmụ nwoke nke ahụ mmadụ). Ọ bụghị naanị cancer ma eji na elu nkebi nke hormone ụkpụrụ, testosterone akara wdg Mara ojiji nke Triptorelin Acetate ma ọ bụ Triptorelin Injection, Ọ nwere ike ịbụ nnọọ uru na ụwa taa. Onye na-eme Triptorelin Acetate na-egosikwa na ị ga-ewere echiche ndị dọkịta gị tupu iwere ọgwụ ahụ.
A na-ejikwa Triptorelin Acetate agwọ ọrịa kansa ara na ụmụ nwanyị. Otu ihe ekwesiri ighota na ogwu ogwu nke Triptorelin Acetate agaghi ewepu sel cancer n’onwe ya, O na-ebelata uto nke homonụ nke na mkpụrụ ndụ kansa na-akwụsị ịgbasa n’ime ahụ mmadụ, Nke a bụ ọgwụgwọ naanị ya na-enwekarị nwayọ nwayọ Echefukwala ilele ahụike gị mgbe niile na okwu ahụ site na iji ọgwụ ahụ na ụdị ihe ọ bụla na-adịghị mma ga-agwa dọkịta gị tupu ya amalite ma malite igosipụta mmetụta dị egwu.
Ọgwụ ahụ na - amalite ọrụ ya site na ịmalite site na akwara ma ọ na - egbochi homonụ na - akpali akpali dị ka testosterone wdg. Ihe omume microbiological na homonụ na akụkụ ahụ na - ahapụ mkpụrụ ndụ nwere ike ọ gaghị adị oke egwu mana ọ ka dabere na usoro ọgwụ na ọgwụ mgbochi nke mmadu. Na mkpokọta, otu onunu ogwu egosighi nsonaazụ mana otu usoro ọgwụgwọ dọkịta nyere gị ga-enyere aka n'usoro uto.
Triptorelin Acetate (140194-24-7) a na-eji ọgwụgwọ ọrịa kansa (ọrịa cancer) na usoro uto nke homonụ. Triptorelin Acetate ọgwụ nyere dọkịta gị dị ka ụdị nke ogwu ogbugba, na-abụkarị, ogwu ahụ ga-abụ otu ugboro n'ime izu 4 ọ bụla (nke a nwere ike ịdị iche na ọnọdụ ahụike gị na ọgụ). Ga-akpachara anya na usoro onunu ogwu iji zere mmetụta ọ bụla na-enweghị isi. Maka uru gị, ana m enye ndụmọdụ ịka akara ụbọchị gị na kalenda ma na-ewere oge ọgwụ Triptorelin Acetate na ezigbo usoro onunu ogwu maka nsonaazụ kacha mma. Urinary mkpọchi bụ alụlụ a na-ahụkarị ebe a na-eji ọgwụ a. N'okwu a, ị ga-agakwuru dọkịta gị ma ị ga-arụkọ ọrụ a ọnụ na nhazi gị. Agbanyeghị, nke a ga-abụ maka izu abụọ mbụ. Ugboro oge, Ọkpụkpụ mgbu nwere ike ịbụ ihe mgbaàmà ole na ole ọzọ na ọgwụ a ma ị ga-agwa dọkịta gị ma ọ bụrụ na ha anọgide na-abawanye na mgbu. ọ bụ ezie na enweghi nsogbu dị egwu dị egwu, Enweghị ihe ọ bụla dị njọ ịnọ n'akụkụ nchekwa ka ị na-anwale ọgwụ ọhụrụ. Enwela oke ụjọ, ọgwụ ahụ na-arụ ọrụ nke ọma na gị ma nwee nkwado dọkịta gị mgbe niile. N'oge ọ bụla n'oge ọgwụ ahụ, nweere onwe gị ịkpọtụrụ dọkịta gị gbasara nsogbu ọ bụla gbasara ọgwụ ahụ. Okachamara ga-akọwapụta ọkachamara gị ma m ji ndụmọdụ nye gị ndụmọdụ ka ị ghara ịmetụta ụdị ọgwụgwọ ọ bụla ma ọ bụ oge ọgwụ ahụ.
Ọtụtụ ndị mmadụ na-arịa ọrịa prostate ma ọ bụ nsogbu uto mbụ na-eji Triptorelin Acetate eme ihe. Ha kwesịrị ịma na a ga-agwọta ọrịa a mgbe ha bịara n'oge na-a theụ ọgwụ. Ha ga-oge oge ha dọkịta onwe ha / ọkachamara banyere n'akụkụ-emetụta ma ọ bụ ihe mgbaàmà, Mgbe ụfọdụ, ndị kasị eleghara anya n'akụkụ-mmetụta nwere ike tolite n'ime a ezigbo nsogbu. A ghaghi ilebara ihe ndi a anya tupu i jiri ogwu a dika ogwu. Onye ọrịa ahụ ga-ebukwa n’uche na ọgwụ ọgwụ Triptorelin Acetate agaghị ewepụ ọrịa kansa n’otu oge, Ọ na - akwụsị homonụ nke na - akwụsị uto nke mkpụrụ ndụ cancer. Ọgwụ a anaghị ekpochapụ kansa n’ahụ gị; Ọ na-agwọ ọrịa nwayọ nwayọ ma kwụsie ike site na ịhapụ ya ka o too. I kwesịkwara ịchọ Nyocha nyocha Triptorelin Acetate. Ọbụlagodi na enwere ndị enyere, ọ nweghị ihe ọjọọ dị na ịchọrọ nyocha ahụ Triptorelin Acetate na ịntanetị.
Triptorelin Acetate ziri ezi maka gị ma ọ bụrụhaala na ị na-ata ahụhụ site na nsogbu hormonal. Triptorelin Acetate nwere ike iji onye ọ bụla nwere nsogbu ahụ belụsọ ụmụ nwanyị dị ime. Ọzọkwa, ị ga-ewere ndị dọkịta ka ị tụlee ọgwụ ahụ n'ihi na ọ nwere ike ịma banyere ahụ gị nke ọma. A gharịrị ịgwa dọkịta gị okwu ọ bụla metụtara ahụike ma atụnyere onwe gị na nke ọ bụla ọzọ na-agabiga otu ọgwụ ahụ, gị abụọ nwere ike ịnwe nsogbu na usoro iri nri, onye ọ bụla abụghị otu. Triptorelin Acetate na-ebute ọgwụgwọ, ma ọ bụrụ na ọ bụ gị na-achọ ya mgbe ahụ ọ dị mma maka gị. Triptorelin Acetate ntụ ntụ ma ọ bụ Trelstar, Ọbụna nke a nwere ike ịbụ ntakịrị ihe mgbagwoju anya. Triptorelin Acetate ntụ ntụ dịtụ ọnụ ala karịa ịgba ntụtụ. Mana ntụtụ ahụ gosipụtara nsonaazụ ka mma ma e jiri ya tụnyere Triptorelin Acetate ntụ ntụ.
You nwere ike ịzụta Triptorelin Acetate na ụlọ ahịa ọgwụ echekwaara echekwa. Can nwere ike ịga leta ngalaba ọ bụla Phcoker iji nweta Triptorelin Acetate gị na ọnụahịa dị oke ọnụ. Na-enyocha akara na ụbọchị njedebe tupu ịzụrụ Triptorelin Acetate mgbe niile.